musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Costa Rica Kupwanya Nhau » Costa Rica ikozvino inoda humbowo hwekudzivirira COVID-19
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Costa Rica Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Nzvimbo dzese dzekutengesa muCosta Rica dzinoda humbowo hwekudzivirira kweCCIDID-19 mukuyedza kuchengetedza vagari venzvimbo nevashanyi, kutanga muna Ndira 8, 2022.
Vese vashanyi, zvisinei nezera uye mamiriro ekudzivirira, vanofanirwa kuzadza fomu remagetsi epidemiological HEALTH PASS, angangoita maawa makumi manomwe nemaviri vasati vafamba.
Avo vanoiswa jekiseni vanofanirwa kubatanidza yavo "COVID-19 Vaccination Record Card" pafomu uye vanogamuchira chaiyo QR kodhi yavanogona kushandisa kupinda munzvimbo dzekutengesa munyika.
Kubva musi waZvita 1, 2021 kusvika Ndira 7, 2022, pachave nenguva yeshanduko apo vezvekutengesa vanogona kubvuma vanhu vasina hurongwa hwejekiseni hwakakwana, kunze kwekunge vashanda pa50%.
Kutanga Ndira 8, 2022, mabhizimisi ese mu Kosita Rika zvichada humbowo hwekudzivirira COVID-19 mukuyedza kuchengetedza vagari vemunyika nevashanyi. Humbowo hwejekiseni hunofanirwa kuongororwa neQR kodhi kana "COVID-19 Vaccination Record Card," uye huchashanda kuvanhu vese vane makore gumi nemaviri zvichikwira. Nzvimbo dzezvekutengesa dzinosanganisira mahotera nenzvimbo dzekutandarira, maresitorendi nemabhawa, masevhisi ekushanya, makasino, zvitoro, mamiziyamu, nzvimbo dzekurovedzera muviri, uye zvikoro zvehunyanzvi nekutamba. Masevhisi akakosha, akadai sezvitoro zvegirosari nemishonga, haazodi humbowo hwekudzivirira COVID-12.
Kubva musi waZvita 1, 2021 kusvika Ndira 7, 2022, pachave nenguva yeshanduko apo vezvekutengesa vanogona kubvuma vanhu vasina hurongwa hwejekiseni hwakakwana, kunze kwekunge vashanda pa50%. Zvivako zvinosarudza kushanda pa100% huwandu hunofanirwa kuda humbowo hwekudzivirira COVID-19.
Kosita Rikazvinodiwa zvekupinda zvinosara sezvizvi:
Vese vashanyi, zvisinei nezera uye mamiriro ekudzivirira, vanofanirwa kuzadza fomu remagetsi epidemiological HEALTH PASS angangoita maawa makumi manomwe nemaviri vasati vafamba. Avo vanoiswa jekiseni vanofanirwa kubatanidza yavo "COVID-72 Vaccination Record Card" pafomu uye vanogamuchira chaiyo QR kodhi yavanogona kushandisa kupinda munzvimbo dzekutengesa munyika.
Vashanyi vakabaiwa nhomba yakakwana yeCOVID-19 uye vadiki vari pasi pemakore gumi nemasere vanogona kupinda munyika vasina inishuwarenzi yekufambisa kusvika Ndira 18, 7. Kutanga Ndira 2022, kusabvumirwa painishuwarenzi yekufambisa kunongoshanda kune vashanyi nevadiki vakabayiwa. vari pasi pemakore gumi nemaviri. Avo vasina kubaiwa zvizere vanofanira kutenga inishuwarenzi yemuno kana yepasirese yekufambisa inovhara COVID-8 uye mari yekuvharirwa, kana zvichidikanwa.